घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू योओ फेलिक्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले उपनाम संग फुटबल प्रतिभा को पूर्ण स्टोरी प्रस्तुत गर्दछ "जोओ"। हाम्रो जोओ फेलिक्स बाल्यकाल कहानी र अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ। विश्लेषणमा उसको प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक तथ्यहरू, जीवनशैली र उहाँबारे अन्य थोरै ज्ञात तथ्यहरू सामेल छन्।
हो, सबैलाई थाहा छ उनी पोर्चुगलबाट बाहिर आउने उत्तम प्रतिभा मध्ये एक हो। यद्यपि, केवल थोरैले जोआओ फेलिक्सको जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
जोआओ फेलिक्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरू गर्दै, जोओ फ्लेक्स सेक्किरा पोर्चुगलमा विइसुमा नोभेम्बर 10 को 1999th दिनमा जन्म भएको थियो। उनी आफ्नो आमा, कार्ला फेलिक्स (एक शिक्षक) र तिनको बुबा, कार्लोस फेलिक्स (एक शिक्षक पनि) मा जन्मिएका दुई जना बच्चाहरू थिए।
जोआओ फेलिक्स आमाबाबुलाई शिक्षिकाको रूपमा काम गरिसकेका थिए। क्रेडिट: PxHere र Maisfutebol।
पोर्तुगाली नागरिक सेतो जातिको युरोपेली जराका आमाबुबा दुवैले आफ्ना गृहनगर भिसेउमा हुर्केका थिए जहाँ उनी कान्छो भाई हुगो फेलिक्ससँगै हुर्केका थिए। धेरै फुटबल प्रतिभा जत्तिकै, जोओले कसरी हिँड्न सिक्ने बित्तिकै खेल खेल्न शुरू गरे र उनको आमाले "बलको लागि एक लत" भनेका विकास गरे।
योआ फेलिक्स पोर्चुगलमा विउसुरुमा हुर्के। क्रेडिट: VLP र Maisfutebol।
त्यसपछि बच्चाहरू आफ्नो आमाबाबुको बासिन्दाको कोठा फुटबल पिचमा रूपान्तरित भए र पछि उनको सानो भाइ ह्यूगो द्वारा सहभागी भएको थियो जसले फुटबलको लागि आफ्नो जुनून साझेदारी गर्यो र कोठामा ब्रेकनेबल वस्तुहरू राख्नको लागि आफ्ना आमाबाबुलाई सतर्कता दिए।
जोआओ फेलिक्स आफ्नो परिवारको बैठक कोठामा फुटबल खेलेर शुरू गरे। क्रेडिट्स: Lifebogger र Maisfutebol।
जोआओ फेलिक्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
इनडोर फुटबलबाट सर्दै, युवा जोओले आफ्नो बुबासँग पोर्तुगलको टोन्डेलस्थित पेस्टिनहास स्कूलहरूमा विभिन्न खेलहरूमा युवा खेल्ने तालिम हेर्न बुबासँगै प्रतिस्पर्धी फुटबलमा आफ्नो क्यारियर निर्माणको शुरुआत गरे।
धेरै समय नबित्दै त्यस जवान केटाले स्कूलको फुटबल टीममा भर्ना हुन अनुरोध गरे जहाँ उसले एक बर्ष प्रशिक्षण पाएको थियो एफसी पोर्टो एकेडेमीमा भर्ना हुन अघि २०० eight मा आठ वर्षको उमेरमा।
योओ फेलिक्सले एफसी पोर्टो अकादमीमा सामेल हुन अघि पेस्टहिन्द विद्यालयहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक फुटबलमा पहिलो कदम उठाए। क्रेडिट: रेकर्ड।
जोआओ फेलिक्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ र रोड प्रसिद्धि स्टोरी
यो मा थियो पोर्टो अकादमी कि योआ5वर्ष को लागि प्रशिक्षित, एक अवधि को समयमा उनलाई पूर्ण कार्यक्रमहरु संग सामना गर्ने चुनौतीहरु मा हुनु पर्छ जो कि Viseu र पोर्टो को बीच दैनिक शटल को शामिल गर्दछ।
जोआओ आफ्ना आमाबुबाको घरबाट एफसी पोर्तोको ड्र्यागन स्टेडियम नजिकै बसाई सरे पछि उनी घरको रूखमा परिणत भए र कहिलेकाँही आफ्ना बाबुआमालाई उहाँसँग समय बिताउन बोलाउँथे। उनले चाँडै पोर्तो मैदानमा आफ्नो खुट्टा फेला पारे र आफ्नो डिभिजनका कप्तान भए।
जोओ फेलिक्स उनको विभाजन को कप्तान थिए, जसमा खेलाडीहरु डियोगो डलाट र डिगोगो लाइट जस्ता थिए। क्रेडिट: अवलोकनकर्ता।
जोआओ फेलिक्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
एफसी पोर्टोसँगको उनको सगाईको चुचुरोमा, जोओलाई खेलको अभावको सामना गर्नुपर्‍यो, जसले उनलाई क्लब छाड्न बाध्य तुल्यायो र पोर्टोका प्रतिद्वन्द्वी बेनिफिकाले उनलाई एउटा स्थान प्रदान गर्‍यो। जोओले १ Ben बर्षे उमेरको रूपमा बेनफिका रिजर्भ टोलीका लागि खेल्न शुरू गरे र आउँदो वर्षहरूमा उनीहरूको सूचीमा उत्रियो।
उनले १ Ben औं अगस्ट २०१ for मा बोभिस्टामा २-० प्राइमिर लीगा जितेर बेनिफिकाको पहिलो टिमको पहिलो खेलाडी शुरू गरे। महिनौं पछि जोआओले इन्ट्राक्ट फ्रान्कफर्टलाई –-२ युईएफए यूरोपा लिग जितेर ह्याट्रिक बनाए। गोलका साथ, जोओ १ and र १2२ दिनको उमेरमा लिगमा ह्याट्रिक गर्ने सबैभन्दा कान्छो खेलाडी बन्नुभयो। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
योओ फेलिक्सले इन्ट्राचट्ट फ्रैंकफर्टको विरुद्ध एक रेकर्ड टोपी-ट्रक बनाए। क्रेडिट: Essentiallysports।
जोआओ फेलिक्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
जोआ फेलिक्स लेख्ने समय अझै विवाहित छन्। हामी तपाईंलाई आफ्नो डेटिङ इतिहास र वर्तमान सम्बन्ध स्थितिको बारेमा तथ्य ल्याउँछौं। संग शुरू गर्न, योआमा त्यो प्रसिद्धि गुमाउनु अघि कुनै पनि गर्लफ्रेंड वा वेग थियो भनेर थाहा छैन। न त तिनी रिश्तेमा छन् वा छोराहरू छन् र यो जैव लेखनको रूपमा छोरी (हरू) छन्।
पोर्तुगाली सनसनी बरु उसको क्यारियरलाई अधिक उचाइमा पु। याउनमा केन्द्रित छ। जे होस्, जोआओमा यस्तो गुणहरू छन् जुन धेरैलाई विश्वास छ कि ऊ एक राम्रो साथी बनाउने छ जब पनि उनी एक सम्बन्ध सुरु गर्ने निर्णय गर्दछन्।
जोआओ फेलिक्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन तथ्य
जोओ फेलिक्स एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँदछ। हामी तपाईको पारिवारिक जीवनको बारेमा तथ्यहरु तपाईलाई ल्याउँछौं। अब हामी तपाईंलाई जोओ फेलिक्सका अभिभावकहरूको बारेमा तथ्यहरू दिन्छौं।
जोओ फेलिक्सका पिताको बारेमा: कार्लोस फेलिक्स जोआओको बुबा हो। उहाँ एक समय फुटबल खेलाडी हो जसले जोओको प्रारम्भिक जीवनको दौरान एक शिक्षकको रूपमा काम गरे। शारीरिक प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्ने सहयोगी बुबालाई जोआओलाई पेशेवर फुटबलको परिचय दिनका साथै एफसी पोर्टो एकेडेमीमा प्रशिक्षण दिन ड्राइभ गर्ने श्रेय पनि दिइन्छ, जुन हरेक हप्ता हजार माइलभन्दा बढीको यात्रा हुन्छ।
जोओ फेलिक्सको आमाको बारेमा: कार्ला फेलिक्स जोआओकी आमा हुन्। उनी एक शिक्षिका पनि थिइन् र कुनै पनि सहयोगी आमाले जस्तै जोवाले फुटबलमा ठूलो बनाएको सुनिश्चित गर्न उनको कोटामा ठूलो योगदान दिए। उनी जोआओको एकदम नजीक छिन् र उनको बिरूद्धको रूपमा डबल्स। तसर्थ, यो कुनै चमत्कार बिना नै भावनात्मक हिसाबले जोओ बचपनको कथा, उसको पीडा, लाभ र भावनाहरू बताउन सक्दछ।
जोआओ फेलिक्सका भाई बहिनीहरूको बारेमा: योआको कुनै बहिनी छैन तर सानो भाई ह्यूगो फेलिक्स भनिन्छ। मार्च3को 2004rd मा जन्मे ह्यूगो जोओआओसँग फुटबल खेलेर बाहिर निस्कियो। उनी अहिले बेन्फिका युनियन प्रणालीमा फुटबलमा क्यारियर निर्माण गर्दैछ र चाँडै आफ्नो भाइ पछि अर्को पोर्चुगल अचम्म-बच्चाको रूपमा लिन सक्छ।
योओ फेलिक्सले आफ्नो भाइ ह्यूगो फेलिक्ससँग। क्रेडिट: एसएल बेनिका।
जोओ फेलिक्सका आफन्तहरूका बारे: जोआओको नजिकको परिवारबाट धेरै टाढा आफ्नो बुवा हजुरआमा र हजुरआमाका साथै उनका हजुरबा हजुरआमाको बारेमा धेरै जान्दछन्। त्यस्तै, आफ्ना काका र काकीको बारेमा त्यति धेरै कुरा थाहा छैन न त उनका काका-काका भतिजाहरू र भतिजालाई उनको बाल्यकालको समयदेखि उल्लेखनीय घटनाहरूमा पहिचान गरिएको छ।
जोआओ फेलिक्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
जोओओ फेलिक्सलाई टिक कसरी बनाउँदछ? हामी तपाईं को Joo व्यक्तित्व को बनाउने ल्याउन को लागी फिर्ता बस्नुहोस् तपाईंलाई उहाँको पूरा चित्र प्राप्त गर्न मद्दत गर्न। सुरुमा, जोओको व्यक्तित्व वृश्चिक राशिको गुणहरू मिलन सम्बन्धी गुण हो उहाँ सजिलै जाने व्यक्तित्व भएको नम्र व्यक्ति हुनुहुन्छ।
थप रूपमा, जोओले आफ्नो निजी र निजी जीवनको विवरण खुलाउने कल्पना गर्दैनन्। जे होस्, ऊ काम गर्न मन पराउँदछ, साथ साथै उसले के गलत गरिरहेको छ जान्न पनि मन पर्छ। उनीसँग केहि शौकहरू र रूचिहरू छन् जसमा फिफा भिडियो गेम खेल्नु र साथीहरूसँग बाहिर आउनु समावेश छ।
जोआओ फेलिक्स काम गर्न र खेल्न सही क्षणहरू जान्दछन्।
जोआओ फेलिक्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली तथ्य
जेओओ फेलिक्सको कुल सम्पत्ति लेखनको समयमा अझै पूनरावलोकनमा छ, तर उनको बजार मूल्य € 35,00 मिलियन छ। उसको थोरै परिचित नेट वर्थको उत्पत्ति उसको फुटबलको प्रयास र समर्थनबाट खडा हो, जबकि खेलबाट बाहिरको आफ्नो लगानीको बारेमा धेरै जान्दैन।
जोआओ फेलिक्स एडिडाससँगको आफ्नो प्रायोजन सम्झौताबाट कमाउँछन्।
अर्कोतर्फ, जोओको कमाई, तलब, खर्च बान्की र सामान्य जीवनशैलीको नजिकको अध्ययनले देखाए कि ऊ भाँडामा रहेको घरमा मध्यम-वर्ग कमाउनेको जीवन बाँचिरहेको छ र उसको स in्ग्रहमा केही कारहरू छन्।
जोआओ फेलिक्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
हाम्रो योओ फेलिक्स लाई लिपिबद्ध गर्न यहाँ केहि साना ज्ञात वा कम तथ्यहरू छन् जुन शायद नै उनीहरूको जैवमा समावेश छन्।
योआ फेलिक्स कहिलेकाहीं पोर्चुगल प्रेस द्वारा यूहन्ना फेलिक्सको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
उहाँसँग कुनै ट्याटोहरू छैन र पिउने वा धुम्रपान गरिएको छैन।
पोर्तुगालीले फिफा 74 मा केवल 19 रेट गरिएको छ र यसको सम्भावना 88 को रूपमा उच्च छ, क्यान्सर मलाई मनपर्छ पल पोगाबा र ईसाई एरिक्सन.
जोआओ फेलिक्स हाल फिफा १ on मा 74 19 को सम्भावितताको साथ 88 XNUMX स्थानमा छन्।
यद्यपि उनको धर्मको बारेमा धेरै कुरा नमिल्ने उनको पक्षमा ईसाई हुन
उनी प्राइम लिगमा सम्भावित चालसँग जोडिएको छ जसमा मैनचेस्टर युनाइटेड मनपर्ने रूपमा बाहिरिएको छ।
योओ फेलिक्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- भिडियो सारांश
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो योओ फेलिक्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।